Kuberekwazve Kwekutsvakurudza 2: Baikals, Grays uye Pleiadeans: Iyo ET Mhando Manning UFOs Akatorwa paVhidhiyo neUS Navy uye UFO Yakafotwa neItari Navy - Kuberekwazve Kwekutsvagisa
Chirevo ne: Walter Semkiw, MD
Neyekuisa kubva ku: Mweya Kuva Ahtun Re yakatumirwa kuburikidza naKevin Ryerson
Dzvanya pamifananidzo kuti uwedzere uye kuti uverenge zvinyorwa
US Navy Pilots Vanobata UFOs paVhidhiyo
Ini ndakatanga kufarira maET uye maUFOs apo US Navy payakasimbisa munaGunyana 2019 kuti mavhidhiyo eUFO akanyorwa neUS Navy varwi vezvikepe vaive vechokwadi.
Ndine maonero akasarudzika pane izvi nyaya sezvo ndanga ndichishanda neye trance svikiro Kevin Ryerson kubvira 2001, uyo anodzinga mweya unonzi Ahtun Re, uyo aratidzira kugona kwekuita apfuura hupenyu machisi nehupamhi hwechokwadi hwechokwadi. Sezvinotsanangurwa pazasi, Ahtun Re ane ruzivo maererano neET uye maUFO.
Uchapupu hwekuzvarwa patsva hunogona kubatsira Kugadzira Nyika Ine Runyararo uye Kufambisa ET Kubata
Chandinonyanya kufarira chave chiri muuchapupu chaihwo hwekuzvarwa patsva, izvo zvinoratidza izvo isu tinogona kuchinja chinamato, dzinza uye nyika kubva kune imwe hupenyu kuenda kune imwe. Kunzwisisa uku kuchagadzira nyika ine runyararo, sezvo mhirizhonga yakawanda nehondo zvichibva pamusiyano mune aya mamaki emamaki ekuzivikanwa. ETs vanozeza kubata vanhu zvakananga nekuda kwetsika yedu yekuita zvechisimba uye kurwa hondo.
Sezvakatsanangurwa muchinyorwa changu chekutanga, ETs inoshanduka pamweya kuburikidza nehurongwa hwekuzvarwa patsva, sevanhu. Saka nekudaro, isu tatova nechimwe chinhu chakakosha chakafanana.
Ahtun Re ane ET Mahofisi
Sezvacherechedzwa, Ahtun Re anorondedzera kuti iye zvakare ane ruzivo rwakawandisa rweET uye yavo spacecraft. Chinyorwa changu chekutanga pane iyi nyaya, iyo inosanganisira iyo US Navy mavhidhiyo, anowanikwa pazasi:
ETs, UFOs, Kuberekwazve, Mwari, Embryology uye Matemplate eUpenyu, neMakomenti pane maShow "Asingazivikanwe" uye "Vatorwa Vekare"
Tichifunga kuvimbika kweUS Navy mavhidhiyo, ndakabvunza Ahtun Re ndeupi ET mhando mutyairi iwo chaiwo maUFO akabatwa paNavy fighter mutyairi mavhidhiyo.
Chinhu chimwe chete chandakadzidza mumatanho angu ezvikamu zveUFOs naKevin naAhtun Re ndeyekuti akawanda ET marudzi anoshanda pamwechete, zvese pane spacecraft tekinoroji uye mumabatanidzwa mamishini.
Mamiriro acho akafanana chaizvo nema astronauts emarudzi akasiyana siyana epasi anoshanda pamwechete paInternational Space Station (ISS).
Iwo maBaikals: ETs eMakungwa ePasi uye Makungwa
Rudzi rwakakurumbira rweET rwakaratidzwa mumavhidhiyo eU.S. Navy, atichatumidza kuti "Baikals," yakabva mupuraneti remvura rinotenderera nyeredzi mukati medu Gwara Renzou, ratisati tawana.
Sezvo iyi mhuka yakashanduka papuraneti remvura, mazhinji emabasa avo pasi pano anosanganisira nyanza uye hupenyu hwayo hwemumvura. MaBaikals anogona kutaridzwa ET oceanographer.
Muchokwadi, aya maET akacherechedzwa nemauto eSoviet akasiyana mu Lake baikal, iyo mune dzimwe nzvimbo inodarika zviuru zvishanu zvemamita pakadzika uye inobata kota imwe yemvura yese yakachena paPasi. Sezvo iri rudzi rweET rwucherechedzwa muLake Baikal, tinozovadana se "maBaikal."
Iyo 1982 Gungwa Baikal ET Chiitiko
Lake Baikal iri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweSiberia, padyo nemuganhu neMongolia. Muna 1982, mauto eSoviet aive achirovedza kurovedza kwevanoshambira muLake Baikal.
Vanomwe vasiyana veSoviet vaive vangangoita 160 tsoka pazasi pevhu pavakacherekedza kuti ivo vaionekwa neboka revanhu-vakaita sevanhu vaive vangangoita mamita gumi pakureba. Mumufananidzo weboka reBaikals machena machena matangi pazasi pemufananidzo anomiririra scuba giya revaSoviet vakasiyana.
Zvisikwa izvi zvaipfeka sutu dzakakomberedzwa dzesimbi uye yaive nengowani semidziyo inovhara misoro yavo, kunyangwe ivo vasina matangi aigona kuendesa mweya kana oxygen. Mushure menguva yakati rebei, izvi zvisingawanzo humanoid zvisikwa zvakadzikira kubva mukuona kwevazhinji veSoviet.
Kuedza Kubata Gungwa Baikal ET Mhedzisiro muRufu rweVane Soviet Masoja Akasiyana
Mushure mekunge vamwe veSoviet vadzokera mungarava yavo ndokumhan'ara zvavakasangana nazvo nezvisikwa zvakareba makumbo gumi nepfumbamwe, mutungamiri akaraira avo vakasiyana siyana kuti vadzokere kwavakaona zvisikwa izvi kuti vabate chimwe chazvo. Vakasiyana vakapihwa michina yekubatsira mumishoni iyi, kusanganisira nemambure makuru.
Vanomwe vemauto eSoviet vanochinja-chinja zvakare vakaburukira kungangoita 160 tsoka pazasi pechiso. Ava vakasiyana-siyana zvakare vakasangana nezvisikwa zvipfumbamwe zvakakwirira. Ichitevera mirairo, mumwe wevatyairi veSoviet akaedza kubata chimwe chezvisikwa nemambure.
Pamusoro peichi chiito chekuyedza kubata, maBaikal ETs akashandisa imwe mhando yechombo chakakonzera kuti vanamati vanomwe veSoviet vaswededze kumusoro nechinguva.
Kukwidza kwakakurumidza uku kwakakonzera kuti vanochinja veSoviet vaoneakakotama, ”Mamiriro ezvinhu anoitika kana uchinge wabuda kubva pakadzika nekukasira, zvichikonzera nitrogen kuumba muropa, iyo inogona kuuraya. Mushure mekukwira nekukurumidza uye nekukonzera kukombama, 4 yevakasiyana vakafa uye vamwe vatatu vakatambura zviratidzo zvehutano husingaperi. Vakapona vakashungurudzikawo pamoyo nezvavakasangana nazvo.
Cherekedza: Iyo mifananidzo yeartist yeBaikals yakapihwa pamusoro inobva kuTV show:
UFOs: Iyo Yakarasika Uchapupu: Yakadzika Gungwa Kusangana, Mwaka 1, Chikamu 2
The Pleiadeans uye UFO Technology
Imwe ET mhando iyo yave ichibatanidzwa muUS Navy Navy UFO mavhidhiyo anosanganisira mweya kubva kuPleiades boka renyeredzi, asi zvakare, Ahtun Re yakaratidza kuti mweya kubva kuPleiadean nyeredzi system pakutanga yakashanduka papuraneti mune reAndromeda boka renyeredzi.
Pleiadeans ndevamwe vemberi kupfuura vana vaMwari. Muchinyorwa changu chekutanga pane ET, ndakanyora kuti paavhareji, ETs yakawana michina yekuchenjera, senge mota yeTesla, makore mazana mana ezviuru apfuura.
Kune rimwe divi, Ahtun Re akagovana kuti vaPleiadeans vakagadzira michina yekuchenjera yekugadzira pamusoro pemamiriyoni maviri emakore apfuura.
Uye zvakare, ivo vane ndangariro dzinodzokera kumashure kwezvizvarwa uye nekudaro, Ahtun Re akadaidza maPleiadeans se "maRibrari eZvose."
Ivo zvakare mainjiniya akanaka uye vanoshanda nemamwe ET marudzi pane spacecraft budiriro.
Zvekufarira, vaviri vashandi veSoviet space chiteshi Salyut 7 vakaona zvisikwa zvakakura zvengirozi kunze kwenzvimbo yadzo yemuchadenga muna 1984. Ahtun Re akaburitsa pachena kuti ava vaive maPleiadians mumitumbi yavo yemaastral kana yemweya, sezvakatsanangurwa muchinyorwa changu chekutanga pamusoro peUFOs. Kuti udzidze zvakawanda, ndapota enda ku:
Pleiadians Vanoshanyira Salyut 7 muMitumbi yavo yeMweya
Nesumo iyi, rega ini ndigovane izvo maET aibatanidzwa muUFOs vhidhiyo yakatorwa nevamiriri vemauto eU.S. Navy:
2004 Tic Tac Spacehip Yakasangana neMutungamiriri weUS David Fravor weUSS Nimitz Akafambiswa neBaikals
Ahtun Re akarondedzera kuti ngarava yemakumbo makumi mana yakatsanangurwa naMutungamiriri David Fravor muna40 seTic Tac yakaumbwa hunyanzvi, paakange achifambisa kubva kumahombekombe eMexico, kwaigara maBaikals.
Pamusoro peiyo Tic Tac chikepe, vashandisi veRadar vakaona madiki madiki eUFO achiperekedza ngarava yeTic Tac. Ahtun Re akarondedzera kuti ngarava idzi dzaifambiswa nevaPleiadeans vachiperekedza hunyanzvi hweBaikal Tic Tac.
Grays uye iyo 2014 Gimbal Space Craft Yakatorwa paVhidhiyo naUSS Theodore Roosevelt Fighter Pilots
Fighter jet vatyairi vengarava kubva kuUSS Theodore Roosevelt anotakura ndege kubva kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwegungwa reUnited States panguva ya2014-2015 manuevers akavhota vhidhiyo UFO inonzi "Gimbal" spacecraft, iyo yakatenderera sezvo yaibhururuka nekumhanya kukuru.
Gimbal zvinoreva mudziyo unonamira padumbu rendege iyo inogona kutenderera kuti irambe radar kana vhidhiyo track yezvinhu zvinobhururuka apo ndege yacho pachayo inotendeuka.
Uye zvakare, mashanu madiki eUFO akaonekwa achiperekedza iyo Gimbal hunyanzvi.
Ahtun Re aburitsa pachena kuti chiteshi chengarava cheGimbal chakachengetedzwa neET mhando inozivikanwa se "Grays." Tichataura maGrey mune zvinotevera zvinyorwa. Ahtun Re akati ichi chigadzirwa cheGimbal chinomiririra chinyakare uye chisingachashandi dhizaini.
Iwo mashanu madiki eUFO akabatwa pavhidhiyo achiperekedza iyo Gimbal hunyanzvi akaedzwa naPleiadeans.
Mukupfupisa, iyo Tic Tac spacehip yakacherechedzwa naCommander Fravor muna2004 yaive yakamisikidzwa nemaBaikals. Iyo Gimbal hunyanzvi inoonekwa muna 2014 yaigara neGrey ET mhando. Iwo madiki eUFOs achiperekedza hunyanzvi hweGimble akagadzirwa naPleiadeans.
Navy "Enda nekukurumidza" UFO Yakatorwa naUSS Theodore Roosevelt Pilots mu2015 yaive Pleiadian Drone
Yechitatu yeUFO hunyanzvi yakatorwa muvhenekeri yeUS Navy murwi mavhidhiyo yakanzi "GoFast," sezvo mota diki iyi yakaonekwa ichibuda pamusoro pegungwa kubva kuEast Coast yeUnited States.
Ahtun Re akarondedzera kuti iyi yaive Pleiadean drone, kuongorora tembiricha yegungwa. Mune zvese, sezvakatsanangurwa mune yangu yekutanga chinyorwa paET, ivo havasi pano kuzotikunda. Iwo masayendisiti anodzidza nezvepuraneti nekuda kwekusiyana kwayo kunoshamisa kweiyo biologic uye vanovimba kuti vanogona kutibatsira kutiza kutsakatika kwakawanda, uko kunogona kukonzerwa nekudziya kwepasi.
2004 ChiItaly Mauto Euchapupu hweBaikal UFO
Sechikamu chechiratidziro cheTV, Hazvizivikanwe: Mukati meAmerican UFO Investigation, S1, Ep 6-Iyo Zvakazarurwa, paive nechikamu chakaitika muSicily muna 2004. Muchikamu chino, aimbova mukuru wemauto eU.S., Luis Elizondo, akapinda mumusangano nevakuru vemauto eItaly maererano nezvezviitiko zveUFO.
Italian Navy Lieutenant Colonel Clarbruno Vedruccio akagovana musangano weUFO wakaitika kuNorth Sicily.
Vedruccio akarondedzera kuti muna 2004, pakanga paine zviitiko zvekuti dzimba kuchamhembe kweSicily dzakabatwa nemoto uye kuti kubviswa kwevagari kwaifanira kuitwa.
Vagari vemo vakataura kuti matanda esimba anouya achibva kuGungwa reMediterranean akakonzera moto wemisha yavo.
Saucer Yakaumbwa UFO Inoburitsa Energy Beam iyo Inokuvadza iyo Italian Mauto Helikopta
Mukupindura, iyo Italian Navy yakatumira helikopta kuti iongorore mamiriro ezvinhu. Vashandi veherikoputa vakataura vachiona saucer yakaumbwa shure kwavo, yakaburitsa danda remagetsi rakakuvadza michina ye rotor yeherikoputa. Kunyangwe iyo kukuvara isina kukonzera kuti copter ipunzike, kukuvara kune iyo rotor system kwakatorwa mifananidzo.
Ahtun Re akandiudza kuti hunyanzvi hweUFO hwakabatanidzwa muchiitiko ichi hwaive hwakagadzirwa nemaBaikals. Simba remagetsi rakakonzera moto mudhorobha raive risiri rekuzvidira. Asi, vaBaikal vaive vaine matambudziko ehunyanzvi nemaitiro ehunyanzvi ehunyanzvi hwavo, izvo zvakakonzera matanda esimba akakonzera moto mutaundi reSicilian.
Kune rimwe divi, mauto eItari paakatuma chikopokopo kuti chiongorore moto uye saucer rakagadzirwa nehunyanzvi kupfura simba danda rakakuvadza michina ye rotorikopta, Ahtun Re akati ichi chiito chemaonero nemaBaikals, kwete kuparadza helikopta, asi kusiya humbowo hwekuvapo kweBaikal.
Ngativei Vane Nyasha Hwevashanyi vedu ET Vashanyi
Muzhinji, nzvimbo dzekutsvagisa ET avo vane hunyanzvi hwemberi kupfuura isu havadi kutikuvadza. Imwe yemamwe matambudziko avo makuru kupona kwepasi, nekuda kwekudziya kwepasirese uko kunogona kukonzera chiitiko chekutsakatika kwakawanda. Uye zvakare, ivo vari kunetsekana nezvekuti vanhu vanozoita sei pakuvapo kwavo.
Nekuda kwekunetsekana uku, maIT anoita kunge ari kutamba mutambo we "kati negonzo" nevanhu. Vanozvibvumidza ivo kuti vaonekwe mumifananidzo isingaverengeke uye mavhidhiyo anotorwa nevashandi vemauto, pamwe nevevanhuwo zvavo vakapakata nhare dzakangwara. Vanoratidzika kunge vari kutizivisa isu kuti varipano, pasina kuunza kutyisidzira mune yakawanda mamiriro ezvinhu.
Ichave inguva yekufungisisa apo isu vanhu tinogamuchira chokwadi chekuti tine vavakidzani vekudenga vane hunyanzvi hwetekinoroji, pamweya uye nepfungwa kupfuura isu, varipo paradenga.
Kune runyorwa rwe ET uye UFO zvinyorwa, ndapota enda ku: ETs uye maUFO avo
Kuti uchengete ruzivo rwezvinyorwa zvitsva, ndapota Titevere isu kuburikidza neyedu Facebook peji: Kuberekwazve Kwekutsvakurudza